ဟာသများ Archives - ThutaStar
ရနျကုနျမွို့ရှတေိဂုံဘုရားမှာ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ဖွဈရပျတဈခု ဖွဈပျေါ
November 2, 2019 Thuta Star 0
ရနျကုနျမွို့ရှတေိဂုံဘုရားမှာ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ဖွဈရပျတဈခု ဖွဈပျေါ ရှတေိဂုံဘုရားပျေါတှငျ ဘိုးတျော​တဈယောကျ ဗဒေငျဟောနတောကို ဘေးကလူငယျအုပျစု ၄/၅ယောကျက လှောငျသလိုလို ပွောငျသလိုလိုနဲ့ မကျြနှာပွောငျနကွေသညျ။ ကွာလာတော့ဘိုးတျောလဲ ဒေါသထှကျလာပွီး….. `ဟကေ့ောငျတှေ မငျးတို့ငါကိုဘာထငျနလေဲ၊ ငါကြိနျစာတိုကျ အငျးခှကျရေးလိုကျရငျ မငျးတို့ဘဝတှေ ဘာဖွဈသှားမယျထငျလဲ!´´ အဲ့ဒါကို လူငယျအုပျစုက မကွောကျတဲ့အပွငျ ခှကျထိုးခှကျလနျ ဟားတိုကျရယျမောပွီး လှောငျပွောငျနကွေသေးသညျ။ […]
အိမျရှငျ ကြောငျးဆရာမရဲ့ ယောကျြား နှငျ့ ရုပျခြောလှတဲ့ အိမျဖျောမ ဇာတျလမျး
အိမျရှငျ ကြောငျးဆရာမရဲ့ ယောကျြား နှငျ့ ရုပျခြောလှတဲ့ အိမျဖျောမ ဇာတျလမျး မိနျးမ ဖွဈသူက ကြောငျးဆရာမ ဖွဈတော့ တာဝနျကရြာ နယျမွဒေသေမှာ တာဝနျထမျးဆောငျရတယျ။ အိမျမှာ ယောကျြားတဈယောကျပဲကနျြခဲ့တယျ။ သားသမီးက မရှိ စားဖို့ သောကျဖို့ ခကျြပွုတျဖို့က ပွသနာ မကွီးလှပမေယျ့ အဝတျလြှျော နဲ့ […]
မီးပျက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဦးညပြီး နောက်နေ့လည်ထိ ခြင်ထောင်ထဲက မထွက်နိုင်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ
September 27, 2019 Thuta Star 0
မီးပျက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဦးညပြီး နောက်နေ့လည်ထိ ခြင်ထောင်ထဲက မထွက်နိုင်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ ….. ကိုမောင်ကောင်းနဲ့မချောဘုံတို့ ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီး အကြင်လင်မယားဘ၀ရောက်ကြပါတယ် …။ နှစ်ဘက်မိဘကလဲ ပြည့်စုံလှတာမဟုတ်တော့ မင်္ဂလာစရိတ်လေးရဖို့တောင် နှစ်တော်တော်ကြာ စုခဲ့ရတာလေ …။ ဒီတော့သူများတွေလို ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွေ၊ ဘာတွေလည်း မထွက်နိုင်ပါဘူး …။ ကိုမောင်ကောင်းမိဘအိမ်မှာပဲ မင်္ဂလာဦးညကို လွန်မြောက်ခဲ့ရပါတယ် […]
ကုမ္မဏီပိုင်ရှင်သူဌေးက သူ့စာရေးမကို အာရုံရနေတာ ကြာပြီ…
“ကုန်ပြီပေါ့” ကုမ္မဏီပိုင်ရှင်သူဌေးက သူ့စာရေးမကို အာရုံရနေတာ ကြာပြီ… တစ်​ရက်မှာတော့… သူက စာရေးမကို သူနဲ့ ချစ်တင်းနှောဖို့ ညှိနှိုင်း​သတဲ့… … “ဒေါ်လာ တစ်ထောင် ($1000) ကို​မော်​​တော်​ကား​နောက်​ခန်း ကြမ်းပေါ်ချလိုက်မယ်​ …. မင်းကုန်း​ကောက်​​နေတုန်း ငါမင်းကိုမရ ရ​အောင်​ချစ်​ပြမယ်​…. ဘယ်​လိုလဲ..သ​ဘောတူလား.. ​ဒေါ်လာ တစ်​​ထောင်​​တောင်​​နော်​.. စဉ်းစားအုံးမလား..? […]
September 16, 2019 Thuta Star 0
ဘားတခုထဲကနေ အရက်တွေ အရမ်းကိုမူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အရက်တစ်လုံး နဲ့ ညည့်ဌက်ကလေးတစ်ယောက် ဆွဲပြီး ထွက်လာသတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ ဘားအရှေ့မှာ တောင်းရမ်း စားသောက်နေတဲ့ သူတောင်းစား တစ်ယောက်က ဗိုက်အရမ်းဆာနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ကို အစားစားဖို့ ငွေစကြေးစ အနည်းငယ်လောက် စွန့်ကြဲဖို့ အမူးသမားကို တောင်းရမ်းပါတော့သတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ အမူးသမားကလည်း […]
မန်းလေးက လူတစ်ယောက် ရန်ကုန်မှာ အငယ်ထားတာ သိန်း ၅ ထောင်မြတ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်
မန်းလေးက လူတစ်ယောက် ရန်ကုန်မှာ အငယ်ထားတာ သိန်း ၅ ထောင်မြတ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ် မြန်မာပြည်မှာ မယားငယ်ထားတာ ခေတ်စားသတဲ့ မန်းလေးက လူတစ်ယောက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်က ရန်ကုန်မှာ အငယ်တစ်ယောက်ထားခဲ့တယ်။ အငယ်အတွက် သိန်းလေးထောင်တန် အိမ်တစ်လုံးဝယ်ပေးခဲ့ပြီး လစဉ်လတိုင်း ဆယ်သိန်းပေးသုံးခဲ့တယ်။ ဒီတစ်နှစ်မှာ အငယ်နဲ့ သူလမ်းခွဲလိုက်တယ်။ […]
သင်္ကာမကင်းဖြစ်၍ ယောကျာင်္းကို လိုက်လံချေင်းမြောင်းရာမှ ဘဝပျက်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုး
အမျိူးသမီးတဦးသည် သူ၏ အမျိူးသားကိုအိမ်ဖော်မ​လေးနှင့် သင်္ကာမကင်း ဖြစ်နေသည်မှာအတန်ကြာပြီဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ့အမျိုိးးသားသည် နေ့စဉ်ညတစ်​နာရီခန့်တွင် ဗိုက်မကောင်း ဟုဆိုကာရေအိမ်သို့ သွားသွားနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်​နေ့မှာတော့ အမျိူးသား အလုပ်သွားနေချိန်အိမ်ဖော်ကောင်မလေးအားရွာသို့သုံးရက်ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်သည် ညဖက်​ တစ်​နာရီထိုးခန့်​ ရောက်သောအခါသူ့အမျိူးသားက ထုံးစံအတိုင်း အိမ်သာထသွားပြန်သည်။ အမျူ […]
သမီးဖြစ်သူရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ဖြတ်သန်းပုံကို အမေဖြစ်သူ ကြားပြီး သတိလစ်သွားရတဲ့ အဖြစ်…
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့လို့ တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်…
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ပြောတာကို တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် “မရဘူး….ရှင့်ကို ရာအိမ်မှူး​နဲ့ကို တိုင်မှာ….” “မိန်းမကလည်းကွာ….ငါက ချစ်လို့စတာကို…. လာပါ….ပြန်ရအောင်….” “မပြန်ဘူး….မပြန်ဘူး….ရှင့်ကို တိုင်ကိုတိုင်မှာ…. အဲဒါမှ ရှင် နောက်မလုပ်ရဲမှာ….” ရုံးရှေ့က ဆူဆူညံညံ အသံတွေကြောင့် ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီး ထွက်ကြည့်မိတော့ မျိုးချစ်နဲ့ […]
ဝန်ထမ်းများ၏ မိုးလေဝသ အခြေအနေ …
ဝန်ထမ်းများ၏ မိုးလေဝသ အခြေအနေ … ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဗဟိုပြု၍ ဖြစ်ပေါ်နေသော ငွေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းသည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ နှစ်ရက် သုံးရက်အတွင်း မုန်တိုင်းငယ် ဖြစ်လာဖွယ်ရှိနေသည်… မုန့်ဆိုင်များနှင့် စတိုးဆိုင်များအပေါ်တွင် အကြွေး အသင့်အတင့်မှ အကြွေး ထူထပ်နေသည်… လကုန်ခါနီး မြန်မာ့ဝန်ထမ်းလောကတွင် အချေးအငှားများ အားကောင်းရာမှ အလွန်အားကောင်းလာဖွယ်ရှိသည်… […]